July 14, 2019 Mahamoud Batalaale
RASMI: Barcelona ayaa saxaafada u soo bandhigtay saxiixa cusub ee Antoine Griezmann kaas oo saxiixay heshiis shan xili ciyaareed ah wuxuuna qaaday maaliyada No.17 iyada oo Philippe Coutinho uu sii haysan doono lamarkii uu waqtiga dheer Griezmann ku soo ciyaaray ee No.7 ka. (Barcelona)
Kooxda Liverpool ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro gool dhaliyaha kooxda CSKA Moscow ee Fedor Chalov iyada oo hore loola xidhiidhinayay kooxaha Tottenham iyo Arsenal waxaana lagu qiimaynayaa ilaa 20 milyan gini. (Mirror)
Arsenal ayaa dalab horumarin lagu sameeyay waxay ka gudbisay difaaca kooxda Celtic ee Kieran Tierney iyada oo dalabkii kowaad oo 15 milyan gini ku qiimaysnaa ay kooxda Celtic markiiba soo diiday waxayna hadda Gunners gudbisay dalab 25 milyan gini ah kaas oo la filayo in ay kooxda Celtic aqbali doonto. (Sky Sports)
Manchester United ayaa heshiis rekoodh aduun ah oo ku qiimaysan £80 gini waxay la gaadhay kooxda Leicester City iyada oo Man City ka dulqaadaysa saxiixa Harry Maguire. Man United ayaa bixin doonta£60 milyan gini oo lacagta rasmiga ah iyo £20 milyan gini oo ku xidhnaan doonta waxa uu Maguire la gaadho Man United wuxuuna tijaabada caafimaadka mari doonaa barri. (The Sun)
Kooxda Leicester City ayaan waqti badan ku bixin in ay badalka Harry Maguire heshiis la gaadho waxayna kooxda Brighton heshiis kala gaadhay difaaca dhexe ee Lewis Dunk kaas oo ay 45 milyan gini kula soo wareegayso. (Sky Sport)
Heshiiskii ay Man United ku doonaysay saxiixa xidiga khadka dhexe ee kooxda Sproting Lisbon iyo xulka Portugal ee Bruno Fernandes ayaa ku dhaw in uu burburo iyada oo United ayna doonayn in xidigan 70 ka milyan gini lagu qiimaynayo ay xataa 50 milyan ka bixiso.(Correio da Manha)
Kooxda Manchester City ayaa heshiis xor ah kula soo wareegaysa difaaca reer Brazil ee Dani Alves kaas oo hore kooxda Guardiola balantii uu la galay kaga baxay balse Alves oo laga fasaxay kooxda PSG ayaa Etihad Stadium waxa uu todobaadkii mushaar ahaan uga qaadan doonaa £120,000-kun gini. ( Express)
RASMI: Kooxda Valencia ayaa ku guulaysatay saxiixa gool dhaliyihii ay kooxaha Liverpool, West Ham United iyo Barcelona doonayeen ee Maxi Gomez kaas oo ay ku heshay 14.5 milyan yuro oo lagu daray Santi Mina oo kooxdeeda dalabka xidigan raacisay kaas oo isna Celta Vigo ku biiray.
Lacagta lagu burburin karo qandaraas uu Maxi Gomez u saxiixay kooxda Valencia ayaa lagu burburin karaa 140 milyan yuro waana arin muujinaysa sida ayna Valencia u doonayn in kooxaha waa wayn ee Barcelona iyo Liverpool ay ku soo laabtaan xidigan.
RASMI: Kooxda Celta Vigo ayaa dhinaceeda si rasmi ah ugu dhawaaqday heshiiska ay Valencia kagala soo wareegtay Santa Mina kaas oo qayb ka ahaa heshiiska uu xidiga reer Uruguay ee Maxi Gomez uu kooxda Valencia ugu biiray.
Xidiga khadka dhexe ee Fabian Delph ayaa laga saaray liiska kooxdiisa Manchester City ee dalka China ugu soo diyaar garoobaya xili ciyaareedka cusub. waxaana loo soo bandhigay in kooxda Everton ay £9 milyan gini kula wareegi karto. (Sky Sports)
Daniel Sturridge ayaa gacan caawinaad ka helay kooxda Talyaaniga ka dhisan ee Bologna waxaana la siiyay fursada uu dib ugu soo noolayn karo waayihiisii ciyaareed ee waqtiyadii ugu danbeeyay hoos u dhaca wayni ku yimid. Sturridge ayaa laga fasaxay Liverpool waxaana lagu heli karaa si xor ah.(Daily Express).
Manchester City ayaa ku kalsoon in xidiga 100 milyan gini lagu qiimaynayo ee Leroy Sane uu iska diidi doono kooxda dalkiisa Germany ee Bayern Munich iyada oo ay City kalsooni ku qabto in xataa haddii ay Bayern dalab rasmi ah soo gudbiso uu Sane kooxdooda sii joogi doono. (Daily Express)
Jurgen Klopp ayaa la waydiiyay haddii ay kooxdiisa Liverpool la soo saxiixan doonto difaaca bidix oo cusub wuxuuna sheegay in ay lumiyeen difaac bidix balse ay wali haystaan James Milner iyo laba da’yar oo Andy Roberson caawin kara balse meesha kamuu saarin in ay difaac bidix la soo wareegi doonaan. (Sky Sports)
Arsenal ayaa xili danbe Man City kula soo biirtay tartanka Dani Alves oo si xor ah lagu heli karo kadib markii uu Unai Emery maamulka kooxdiisa Gunners ka dalbaday in ay la xidhiidhaa Alves oo hore Man City loola xidhiidhinayay (AS)